Brunette nge esiphongweni njalo ukuziba!
Njalo girl uyaphupha mayelana nendlela ukushintsha kwekhanda lakho nsuku zonke, kodwa, ngeshwa, akunakwenzeka. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba ukhule izinwele ke bazonqunywa. Kodwa kukhona bang! Akunandaba ukuthi umbala izinwele zakho ziqonde noma abacaphuni bona - esiphongweni uyohlale endaweni. Fashion asemaphethelweni Angisoze. Cabangela lesi sihloko njengoba benjalo. Sethemba ukuthi kuzosiza iseluleko sethu kanye nezincomo.
Zezinwele nge esiphongweni ngqo
esiphongweni Straight - Classic, it sondela haircuts ehluke ngokuphelele. Ngokwesibonelo, wendlale izinwele uyonika ukushaqeka izinwele eliphakeme nakakhulu ngenxa ushintsho bushelelezi kusuka omcane imicu eside, kusiza ukuqeda semikhawulweni yokuhlukanisa futhi unike izinwele zemvelo, kukhanya okunempilo. Uma - umnikazi yohlobo unxande lomuntu ke le kwekhanda ngeke ezikufanelayo kahle. Futhi blonde kanye Brunette nge esiphongweni uyobheka angenakuvinjwa nganoma yisiphi isikhathi. Kuwo wonke umlando walo esiphongweni kwavele izinguquko ezihlukahlukene. umphetho etshekile futhi manje esiphuthumayo kakhulu. Inikeza isithombe ukudlala ethile, ukunganaki, ongaboni uvuseleleke indlovukazi yakhe. Inzuzo yayo eyinhloko ukuthi kufanelekile ngokuphelele noma yiluphi uhlobo lomuntu nobude izinwele futhi inesikhala esincane: kuphela hairdryer kanye ikamu kuyadingeka ukuze ukufakwa kwalo. Bangs ngenkuthalo lisetshenziswe ukudalwa lomshado futhi kusihlwa zezinwele. A Brunette nge esiphongweni ukuze ohlangothini uyobheka mnene futhi ekhangayo.
Uyavuma ukuthi noma iyiphi intombazane, blonde, onsundu ngokuphaphathekile noma abe Brunette nge esiphongweni ubukeka ezithakazelisayo ezingaphezu kuka ngaphandle kwalo. Mhlawumbe yingakho fashion ngabo ingenziwanga iminyaka eminingi. Kukhona kwekhanda entsha, futhi ngamunye kukhona indawo esiphongweni. Ngokwesibonelo, cishe wonke zezinwele intsha aqukethe lesi sici. Kuyinto eyejwayelekile zezinwele nge izinwele iqonde ngokugcwele, ngezinye izikhathi engalingani. Kukhona esiphongweni ekhethekile ngesitayela "emo".
Okudumile e-80s alungise izinwele nge uboya awunakuba khona ngaphandle kokuthethelela lesi sici. Lokhu kwekhanda kokwenza Brunette nge esiphongweni, blonde , ngisho owawina ngezinwele ezibomvu. Ukwakha kwekhanda enjalo ambalwa imicu kumele ahlukaniswe phezulu, ikamu esihle nekama ewayisa izimpande, bese usebenzisa i-ibhulashi massage nekama ngibabone, ngaleyo ndlela ukudala ivolumu. Ukuze ulungise, ungakwazi ufafaze lacquer ngemva backcombing umucu ngamunye. Bangs zezinwele for umugqa ofanelekayo. Uma uya endaweni ethile ebusuku, izinwele kufanele kuthathwe ngokucophelela. Kusihlwa zezinwele sikhululeke kakhudlwana futhi mahhala, nenhle futhi ecebile. Uma uya disco - kungcono hhayi skimp on ukuvenisha futhi izinwele gel ukuze "indalo" engabantu yakho owawuse eside ngangokunokwenzeka. Ukuze uhambo kule nkundla nenkanuko edlulele oluqinile akudingekile, ukhethe kwekhanda ukuze ivumelane isithombe sakho ngokwanele ukuze lahlanganisa ingubo. Ukudala i look kusihlwa, Brunette nge esiphongweni (amantombazane nezinwele ezimnyama, yena umi phandle okungaphezu kwalokho izintokazi svetlenkih) ongazithanda ukugxila, futhi, kunalokho, wenze isici zezinwele ongabonakali usebenzisa izikhonkwane noma izinwele gel.
Izinwele Clipper. Yikuphi okungcono ukusetshenziswa ekhaya?
Ukubukeka Star. Hairstyle, efana Lely
Zehena kungekho nto enemibala emihle. Amazwana isicelo
Zezinwele nsukuzonke nezinwele ezimfishane: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, izithombe
Sultans yoMbuso WaseTurkey ngasekupheleni isimo enkulu. Indima emlandweni
Angcolile ingilazi ophahleni ngezandla zakhe. Uphahla lwangaphakathi kuthiwa ingcoliswe kwasemuva
Apple and iplamu ujamu: esiphundu, nenhle, elula!
Bashkiria, sibhedlela "Karagai": incazelo, amasevisi, ukwelashwa, kanye nokubuyekeza
Yiziphi amaholide ngo-December, uthi iSonto Lobu-Orthodox?
Amaphuzu asemqoka kanye izimfanelo Old Russian isimo imfundo
Marshal Rokossovsky: biography emfushane nezithombe
Indlela yenza ikhofi kahle
Ukungcoliswa kwemvelo: izinhlobo ukungcola kanye nencazelo yabo